Friday, 10 May, 2019 11:20 AM
एकाध वर्षअगाडिसम्म ललितपुर, कुमारीपाटीमा काष्ठमण्डप नामक कम्प्युटर पसल चलाएर बस्ने मान्छे आज एकाएक नेपालका दिग्गज दिग्गज नेतालाई विदेश घुमाउने, औषधी उपचारको खर्च तिरिदिने, तिनका नातापातालाई ठाउँठाउँमा घरको व्यवस्थापन गरिदिनेअवस्थामा पुगेको सुन्दा आश्चर्य लाग्छ ।
राजाका पालामा पेट रोगसम्बन्धी चल्तापुर्जा चिकित्सक थिए, आइएल आचार्य । उनका दुई छोरा छन्, सतिशलाल र सचिनलाल । ०६३ सालमा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा यिनीहरुले स्मार्ट मोबाइलको लाइसेन्स फुत्काए । अहिले यिनीहरुमाथि मुद्दा छ, नेपाल सरकारलाई अर्बौं राजस्व नतिरेकोबारे । र, मुद्दा मिलाउने क्रममा शक्तिकेन्द्र रिझाएर कहिले के, कहिले के गर्दै हिँड्छन् ।
पूर्वयुवराज पारसलाई सिंगापुरमा बस्ने–खानेदेखि प्रचण्डपत्नी सीताको उपचार खर्च गर्नेसम्मको काम यिनीहरुकै हो । जसरी ठेकेदार दीपक भट्टले बैंककको जिम्मा लिन्थे, त्यसरी नै यिनीहरु सिंगापुरको खर्च व्यहोर्नेमा पर्छन् । कम्बोडियादेखि अफ्रिकासम्मका दूरसञ्चार सेवामा उनीहरुको लगानी छ । एनसेलमा सतिशकी पत्नी भावनासिंह श्रेष्ठको नाममा २० प्रतिशतको साझेदारी छ । यिनीहरु लोकमानको पालामा एनसेलमाथिको कारवाहीबाट जोगिएका थिए । अहिले प्रचण्डका भाइ नाता पर्ने नारायण दाहाललाई पेप्सीकोलामा, नारायणका छोरा समिरलाई शंखमूलमा घरबार जोडिदिएका छन् । कुनै पनि व्यापारीले सित्तैमा नेता र उनका परिवारमाथि लगानी गर्दैन । यसले पनि बताउँछ किन नेपालमा भन्सारपछि सबभन्दा बढी आम्दानी हुने क्षेत्र हो, दूरसञ्चार ! सुमार्गी केबाट रातारात अर्बपति भए ? तिनलाई के नपुग्दो छ र विनोद चौधरी र उपेन्द्र महतो टलिकममै मरिहत्ते गर्छन् ?
कुरा बुझ्न गाह्रो छैन– सिंगापुरमा उपचारका लागि प्रचण्ड जाँदा समिर दाहाल किन सँगसँगै जान्छन् ? सतिशलालको एनसेलको मिडिया म्यानेज्मेन्टका निम्ति बानेश्वर ओह्रालोको एउटा जापानिज रेष्टुरेण्टमा मिटिङ गर्छन् । यसबाहेक अनेकन काम–कुरा भइरहेका छन्, जुन हामी खोज्दैछौँ । विश्वास छ, जनआस्थाले हामीलाई साथ दिनेछ ।
– सञ्जु कोइराला